Indlu Enevaranda - eNew Bern - I-Airbnb
Indlu Enevaranda - eNew Bern
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguShirley
Le ndlu inevaranda esandul 'ukulungiswa ikwindawo ethe cwaka ekwimayile eziyi-5 ukusuka kwidolophu yaseNew Bern. Ngamagumbi okulala amabini, unokulala abantu abayi-4 ngasese. Ikhaya lethu elinento yonke nefenitshala livumela ukuba kuhlalwe ixesha elide, kwaye njengezindlu zethu zonke, akukho MALI YOKUCOCA.
Kukho ibhedi enkulu enye neebhedi ezimbini ezibini. Unxibelelwano lwe-wifi kunye ne-smart TV zenza kube lula ukungena kwi-intanethi. Ukuba ufuna okungakumbi, ilinki ye-Suddenlink okanye i-Century ingaqhagamshelana nawe. Kukho iyadi ebiyelweyo ngasemva yesilwanyana esincinci. Ubuncinane beentsuku ezimbini ziyafuneka. Ukuba ukuhlala kwakho yinyanga eyi-3 okanye ngaphezulu, nceda uqhagamshelane nathi ukuze ufumane ixesha elide lokuhlala.
4.96 · Izimvo eziyi-82
Indawo yethu ngumxube opheleleyo wamakhaya amancinci, amakhaya omlambo kunye namakhaya ahambayo. Yindawo ekwaziyo ukuhamba ngeenyawo nekhuselekileyo. Indlu enevaranda imalunga neemayile ezintlanu ukusuka kwidolophu yaseNew Bern, ekumgama wemizuzu eyi-45 ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya, nemizuzu eyi-45 ukusuka eAtlantiki Beach. Ikwayilungele kakhulu inkqubela yeCarolina kunye neTaberna, kunye neAbelina Plantation kunye neRidge Ridge.
Sihlala esakhiweni, ngoko phantse sisoloko sifumaneka ukuba ufuna uncedo. Siyakuvuyela ukudibana nabantu abatsha, ngoko sinokuthatha inxaxheba (okanye kube nzima) njengoko ufuna ukuba sibe.